ခရစ်တော်၏လိုင်းများတစ်လျှောက်ရှိဆက်ဆံရေးများ - ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဘုရားသခင့်ဘုရားကျောင်းဆွစ်ဇာလန်
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ 2018-04 > ခရစ်တော်၏သာဓကပြီးနောက်ဆက်ဆံရေး
ကောရိန္သုအသင်းတော်တွင်ကြီးမားသောဝိညာဉ်ရေးပြproblemsနာများရှိသည်။ သူမသည်ပါရမီရှင်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းဖြစ်သော်လည်း her ၀ ံဂေလိတရားကိုသူမသဘောပေါက်နားလည်ခဲ့သည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့ကောရိန္သုမြို့သားတွေနဲ့ပေါလုကြားမှာ "မကောင်းတဲ့သွေး" ရှိတယ်။ အချို့ကတမန်တော်၏သတင်းနှင့်အခွင့်အာဏာကိုမေးခွန်းထုတ်ကြသည်။ မတူကွဲပြားသောလူမှုအတန်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်မောင်နှမများအကြားပိုင်းခြားသတ်မှတ်မှုများလည်းရှိသည်။ သခင့်ညစာစားပွဲကိုသူတို့“ ကျင်းပ” သည့်နည်းလမ်းမှာသီးသန့်ဖြစ်သည်။ ချမ်းသာသူများကို ဦး စားပေးကုသမှုပေးခဲ့ပြီးအခြားသူများကိုမူပါဝင်ခွင့်မပြုပါ။ ယေရှု၏ပုံသက်သေကိုမလိုက်ဘဲ g ၀ ံဂေလိတရားကိုချိုးဖောက်ခြင်းမရှိသောအဖွဲ့ခွဲခြင်းကိုကျင့်သုံးခဲ့သည်။
Obwohl Jesus Christus sicherlich im Mittelpunkt der Feier des Abendmahls steht, dürfen wir nicht ausser Acht lassen, welche Bedeutung Gott der Einheit des Leibes der Gläubigen beimisst. Wenn wir in Jesus eins sind, sollten wir auch untereinander eins sein. Als Paulus von der wahren Anerkennung des Leibes des Herrn sprach (1. ကောရိန္သု 11,29), hatte er auch diesen Aspekt im Sinn. In der Bibel geht es um Beziehungen. Den Herrn zu kennen, ist nicht nur eine intellektuelle Übung. Unser täglicher Weg mit Christus sollte aufrichtig, intensiv und real sein. Wir können uns immer auf Jesus verlassen. Wir sind ihm wichtig. Unser Lachen, unsere Sorgen, er sieht das alles. Wenn die Liebe Gottes unser Leben berührt und wir seine unbeschreibliche himmlische Gnade schmecken, kann sich unser Denken und Handeln verändern. Wir wollen das heilige Volk sein, das unser Erlöser sich vorgestellt hat. Ja, wir haben mit unseren persönlichen Sünden zu kämpfen. Aber in Christus sind wir für gerecht erklärt worden. Durch unser Einssein und unsere Teilhabe in ihm sind wir mit Gott versöhnt. In ihm wurden wir geheiligt und gerechtfertigt und die Barriere, die uns von Gott entfremdete, wurde beseitigt. Wenn wir nach dem Fleisch sündigen, ist Gott immer bereit zu vergeben. Da wir mit unserem Schöpfer versöhnt sind, wollen wir uns auch untereinander versöhnen.
ငါတို့အချို့သည်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ ကလေးများ၊ ဆွေမျိုးများ၊ သူငယ်ချင်းများသို့မဟုတ်အိမ်နီးချင်းများအကြားစုဆောင်းထားသောကွာဟချက်များကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်ရှိသည်။ တခါတရံမှာဒီဟာကခက်ခဲတဲ့အဆင့်ပဲ။ ခေါင်းကိုက်သောမာနသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းကိုပိတ်ဆို့နိုင်သည်။ နှိမ့်ချမှုလိုတယ် မိမိလူမျိုးတော်သည်ဖြစ်နိုင်သမျှသဟဇာတဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းအားရခြင်းကိုယေရှုနှစ်သက်သည်။ ယေရှုခရစ်တော်ပြန်လာသည့်အခါ - စက္ကမင်မင်္ဂတွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်ရပ် - ကျွန်ုပ်တို့သည်သူနှင့်အတူရှိလိမ့်မည်။ အဘယ်အရာကမျှကျွန်ုပ်တို့အားသူ၏မေတ္တာမှသီးခြားခွဲထားမည်မဟုတ်ပါ။ သူ၏ဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်မှု၌ထာဝရထာဝရလုံခြုံလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကမ္ဘာပေါ်ရှိဒဏ်ရာရသူများထံရောက်ရှိပြီးယနေ့ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်ကိုဘဝကဏ္ areas အားလုံးတွင်မြင်အောင်ပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးပမ်းနေသည်။ ဘုရားသခင်သည်ငါတို့အဘို့၊ ငါတို့၌၎င်း၊ ငါတို့၌၎င်း၊